🥇 Saliida Tefal Fryers Free ▷ Keebaa la iibsan karaa? Fikradaha iyo Qiimaha
Ma ku fekereysaa inaad hesho a Qalab Bilaash ah Tefal? Shirkadan ayaa ka mid ah hormoodka qalabkan korantada ah waxayna leedahay a Buug-yaraha oo dhammaystiran.
Halkan waxaanu kaa caawinaynaa inaad doorato qaabka ugu fiican ee gurigaaga falanqaynta kuwa ugu caansan ee isticmaala dhexdooda. Taas aawadeed waan arki doonaa kooda faa'iidada iyo khasaaraha, fikradaha iibsadayaasha kuwaas oo tijaabiyey, qiimahooda iyo qaar kaloo badan. U hel kaaga si fudud!
➤ Isbarbardhigga Fryers-ka Saliidda Ka Xorta ah ee Tefal ugu Fiican
Jadwalkan waxaad haysataa dhammaan moodooyinka astaanta is barbar dhig astaamihiisa ugu muhiimsan dhaqso iyo si fudud.
Isku dheeli tiran oo badan
ActiFry 2 1aad
ActiFry Genius XL 2 gudaha 1
FZ761015 - masaska asalka ah
Qalabka masaska ah
Qiimaha lama heli karo
Waa maxay Fryer-ka Saliida Tefal ee ugu Fiican?
Shirkaddu waxay soo bandhigtay dhowr qalab oo suuqa ku jira, inkastoo saddexdan hadda waa kuwa ugu caansan.
Waxay ku saabsan tahay qalabka ugu dhaqaalaha badan ee astaanta, inkastoo ay tahay mid wax ku ool ah, shaqaynaysa oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxa caddaynaya in aanay niyad jabin fikrado wanaagsan oo ka mid ah isticmaalayaasha yaa iibsaday. Halkan waxaan kuugu dhaafnay xogta ugu fiican, inkastoo aad sidoo kale awooddo halkan ka daawo falanqayn dhamaystiran: Tefal Fry Delight
Farxad shiilan Tefal...
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha FX1000
Makiinada weelka lagu dhaqo oo waafaqsan
Isticmaal fudud oo hufan
Koontaroolada aasaasiga ah
Waxaad u baahan tahay inaad walaaqdo cuntada
Qaabkan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu dhammeystiran ee suuqa iyo waliba mid ee ugu wanaagsan ee ay qiimeeyaan isticmaalayaasha. Halkan waxa aad ka arki kartaa soo koobida waxyaabaha ugu muhiimsan ee shiilan, haddii aad rabto inaad aragto falanqaynta faahfaahsan gal linkigan: Tefal Actifry 2 in 1
Hilibka hawada ee Tefal...
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha YV9708
Xakamaynta Dijital ah ee Shaashada LCD
4 barnaamij oo hore loo dejiyay
2 Heerarka karinta isku mar
Fiilada laga saari karo
Qiimo aad u sarreeya
Isticmaalka majarafad ee loo baahan yahay
Heerkulka aan la xakamayn karin
Inkasta oo Express Snacking ay sidoo kale lahayd soo dhawayn aad u wanaagsan oo dhex mara isticmaalayaasha, Hadda waa qalab xoogaa qaali ah. Waxay leedahay faa'iidooyin taas oo aan arki doono soo socda, laakiin muuqaalka muuqaalka 2 ee 1 model waxaan aaminsanahay in aysan u qalmin doorashada qaabkan. Waxaan si qoto dheer ugu falanqeynay xiriirkan: Acifry Express Cunto fudud
Fryer-ka shiidaalka leh ee isku dara hawada kulul iyo dhaqdhaqaaqa dabacsan ayaa bixiya natiijooyin wanaagsan iyadoo aan loo baahnayn in la isku daro ama la socdo cuntada; Awoodda 1.2 kg oo ah ilaa 4 qof iyo suxuunta dhinac ilaa 6 qof
Cunto caafimaad leh iyadoon la shiilin oo la joogteeyo qiimaha nafaqada ee cuntada cusub ama barafeysan oo ka horjoogsata cuntada inay gubato ama engegto, si loo helo natiijo caafimaad leh oo aan lahayn saliid leh hab -gacmeed, heerkulkeedu yahay 70 ilaa 220 C
9 barnaamijyo otomaatig ah oo loogu talagalay shiilan Faransiis, la dubay, la garaacay, duub, kubadaha hilibka iyo khudaarta, digaaga iyo macmacaanka, oo lagu daray laba barnaamij oo cusub: wok iyo cunnada adduunka. mahadsanid ku kariskeeda hawo kulul, waxay iska ilaalisaa urta shiil ee dhibsada
Karinta wax ku oolka ah ee hal talaabo, muujinta caqliga leh ee leh maaddooyinka gaarka ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ku kariso hab wax ku ool ah iyo hal tallaabo, adoo u diyaarinaya maaddooyin kala duwan waqti isku mid ah si aad u sameysid cunto aan fiicnayn
Way fududahay in la isticmaalo shaashadda taabashada iyada oo ay ugu mahadcelineyso shaashadeeda weyn oo leh badhamada taabashada waxaa ka mid ah barnaamijka oo ha ilaali ikhtiyaarrada diirran, si aad wax walba gacanta ugu dhigto, daboolka hufan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto qaybaha la karinayo ee la kariyey oo ku habboon mashiinka weelka
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha FZ761015
Awood Wanaagsan / Saamiga Awoodda
Qalabka cunto fudud
3 Barnaamijyo hore loo duubay
➤ Waa maxay sababta aad u soo iibsato shiilan Saliida Tefal ah?
Inkasta oo ay jiraan noocyo kale oo ka jaban, Tefal waa mid ka mid ah shirkadaha leh waayo-aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan Fryers Hawada kulul waxayna leedahay noocyo ku filan oo lagu qanci karo dhammaan noocyada isticmaalayaasha. Qiimaha aad bixiso wax ka badan waxaa lagugu magdhabi doonaa faa'iidooyin gaar ah waana taas mid ka mid ah noocyada iibka ugu fiican Waa calaamad muujinaysa aqbalaadda wanaagsan ee iibsadayaasha dalkeena.
▷ Faa'iidooyinka ugu muhiimsan
Summada Caalamiga ah ee Prestige
10-sano damaanad dayactir
Dhammaan Makiinada weelka lagu dhaqo oo badbaado leh
Astaamaha qaar ka mid ah shiilan saliid la'aan ah Tefal
Horaan u ognahay taas Shiilan bilaa saliid ah ayaa nolosheena ka dhigaya mid fudud oo caafimaad leh. Waxaan ku karin karnaa dufan la'aan waxaana ku raaxaysan karnaa noocyo kala duwan oo suxuun ah. Laakiin marka lagu daro guud ahaan, waa in aan diirada saarno qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah, kuwaas oo kugu yaabi doona iyo inaad si qoto dheer u ogaato.
Laba aag cunto karinta oo kala duwan
Si loo badbaadiyo wakhtiga jikada, ma jiraan wax la mid ah ku raaxaysiga qaabkan gaarka ah ee shiilan saliidda Tefal. Maadaama ay leedahay laba aag, oo kala soocan. Taasi waa isla mar ahaantaana waxaad karin kartaa xoogaa shiilan oo faransiis ah, dhanka kalena waxaad karin kartaa qaar ka mid ah hilibka doofaarka. Ma jiraan wax ur ah ama dhadhamin ah oo isku dhafan, markaa sida aynu nidhaahno, waxaan ku heli karnaa saxan dhamaystiran oo ku jira indho-beelka, iyo sidoo kale had iyo jeer caafimaad leh.
Marka lagu daro qaybta shiilan lafteeda, waxaanu haynaa nooc saxaarad ah oo la dhigo dusha sare. Sidaa darteed, waxaan leenahay labadan heer si aan u samayno menu laba qaybood ah. Xusuusnow in saxaaraddu ay ku habboon tahay cuntooyinka jilicsan, ama u janjeera inay si fudud u jabaan. Mid ka mid ah fikradaha ugu wanaagsan ee maalin kasta!
Sariiro wareeg ah si aadan cuntada u kicin
Markii aan u maleynay in shiilan saliid la'aan ah Tefal aysan nala yaabin, way sameeyaan. Sababtoo ah hadda waxay sidoo kale leedahay aag wareeg ah. Inkasta oo laga yaabo in aanay u muuqan mid mudnaanta leh, waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn. Sababtoo ah uma baahnid inaad guurto ama cunto rogato, laakiin palette la sheegay waxa loo samayn doonaa si isku mid ah.
Tani waxay sidoo kale u mahadcelinaysaa tignoolajiyada Dual Motion, maadaama ay ku darayso qulqulka hawada kulul iyo dhaqdhaqaaq dhab ah oo siman. Sida aynu nidhaahno, waxay noqon doontaa mid ka mid ah farsamooyinka ugu fiican ee aan gacanta ku hayno, tan iyo wixii ka sarreeya waxay noo keentaa raaxo iyo natiijooyin cajiib ah. Cuntadu had iyo jeer waa qallafsan tahay dibadda laakiin gudaha ayay u jilicsan tahay raaxaysi labanlaab ah.
Barnaamijyo casri ah oo leh hab toos ah
Ikhtiyaarada teknoolajiyada cusub iyo hal-abuurka ku jira waxay ka dhigan tahay in hal gujin kaliya aan ku heli karno wax kasta oo aan u baahanahay, nafteena iyo nafteena, sida cuntada. Shiilan saliid la'aan Tefal ayaa naga dhigaya meel aan la gaari karin cuntada aan dhammaadka lahayn. Dhammaantood wadartoodu waa 9 habayn toos ah. Sidee bay hagaajinta noocaas ahi inoo caawin doontaa? Hagaag, mahadsanid iyaga, marka hore waxaan dooraneynaa cuntada aan diyaarineyno.
Waxay noqon karaan koorsooyinka ugu horreeya sida shiilan, laakiin sidoo kale macaan iyo macaan. Had iyo jeer sida aad jeceshahay! Marka aan dooranno waxa aan karineyno, waa waqtigii la hagaajin lahaa heerkulka saxanka la doortay ama cuntada. Markaa habkan, waxaanu hubinaynaa inay had iyo jeer ku jirto barta. Sidaa darteed, laga bilaabo shaashadda taabashada waxaan ka heli doonaa saacada si aan u hagaajinno kuleylkaas marka la karinayo.
Sida loo nadiifiyo shiilan saliid la'aan ah Tefal
Nadiifintu waa mid kale oo ka mid ah qodobada aasaasiga ah ee lagu xisaabtamayo. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo nadiifiyo shiilan saliid la'aan ah Tefal, waxaanu kuu sheegi doonaa in marka hore aad u ogolaato inay si buuxda u qaboojiso.
Marka labaad, waa in aad furto furkeeda oo aad xidhidhiyaha ama qufulka kor u keentaa. Si aad uga saarto.
Markaad hesho, yaa waxaanu ka saaraynaa qaybaha shiilayadeena. Sida aad ogtahay, waa majarafad, filter iyo meesha loo yaqaan dheriga wax lagu karsado.
Ahaanshaha qaybo laga saari karo, waa run taas waxaad ku ridi kartaa weelka weelka haday nadiifintu kuu roon tahay. Laakiin haddii kale, waxaad sidoo kale ku raaci kartaa isbuunyo jilicsan ama maro si aad uga fogaato xagashada. Iyada oo in yar oo saabuun ah ay ku jiraan, waxaan heli doonaa ku filan si aan uga saarno wasakhda.
Waa run in qaybuhu ay sii dheeraadaan, gacmo-dhaqashada ayaa had iyo jeer lagula talinayaa.
Kahor intaadan dib u dhigin qaybaha shiilan, hubi inay qalalan yihiin. Si tan loo sameeyo, u ogolow inay si fiican u dareeraan ka dibna ku tirtir maro engegan oo jilicsan.
Halkan waxaan kaga jawaabaynaa shakiyada soo noqnoqda ee isticmaalayaasha, Xor baad u tahay inaad kaaga ku waydiiso faallooyinka.
Waxay wax ku karsadaan hawo kulul, waxaanan si faahfaahsan ugu sharraxnay halkan: Hawlgalka Fryers Oil Free
Ma u baahan tahay saliid?
Cuntooyinka dufanka leh maaha laakiin inta soo hartay qaado qaado.
Cunto noocee ah ayaad diyaarin kartaa?
Waxaad karin kartaa noocyo badan oo suxuun ah: Kalluun, Hilib, Macmacaan, iwm.
Baradho noocee ah ayaa la shiilan karaa?
Waa la karin karaa labadaba dabiiciga ah iyo kuwa barafaysan
Intee in le'eg ayay baradhada qaadanaysaa?
Waxay kuxirantahay qaabka iyo tirada laakiin inta u dhaxaysa 15 iyo 20 daqiiqo.
Xagee ka iibsan karaa?
Calaamaddan waxaa laga iibsan karaa dukaamo kala duwan oo jireed (Mediamarkt, Corte Ingles, Carrefour, iwm.) ama waxaad ku samayn kartaa internetka, taas oo aan kugula talineyno Amazon.
Fikradayda ku saabsan shiilan saliid la'aan ah Tefal
Ma odhanayo wax cusub haddaan sheego in noocyadan shiilan ee bilaa saliidda ahi ay cuntadeena ka dhigaan mid aad u caafimaad badan oo aan dufan lahayn. Laakiin waxaan aad ula yaabay shiilantii Tefal. Mar haddii aan naqaanno, waxaan isku mar samayn karnaa laba saxan. Tani waxay la macno tahay in cuntadeena maalinlaha ahi ay yeelan doonto dufan yar laakiin sidoo kale way dhakhso badan doontaa. Maxaa naga dhigi kara inaan wakhti yar ku qaadano jikada, kuwa aan iyaga jeclayn ama laga yaabee, kuwa waqti yar ku haysta shaqada. Tani waa faa'iido weyn in la muujiyo.
Labadaas taarikada, kuwaas oo geli doona qaybo kala duwan ayaa ka soo baxa si ka fiican. Muuqaalkooda iyo sida ay casiir u yihiin ayaa la yaab leh, gaar ahaan marka ay timaado hilibka ama kalluunka. Laakiin waa run in aad diyaarin karto wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah hadiyadaha ugu fiican ee aan awooday in aan helo: suxuunta caafimaadka leh, laba saxan oo isku mar ah, iyada oo aan walaaqin cuntada iyo in ay tahay qalab sahlan oo la isticmaali karo. Maadaama aad haysato barnaamijyo caqli badan, waxay kuu qaban doontaa dhammaan shaqada adiga, adoo dooranaya heerkulka karinta, tusaale ahaan. Wax kale ma weydiin kartid!
(Codadka: 4 Celcelis: 5)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Tefal